ट्वाइलेटमा बसेर मोबाइल चलाउनेहरू सावधानः ज्यान जान सक्ला हैँ
असाेज ३ । अहिले मोबाइल धेरै मानिसको जीवनको अभिन्न अंग नै बनेको छ । जसको हातमा हेर्दा पनि मोबाइल नै देखिन्छ । हरेक मानिसको नजिकको साथि मोबाइल नै बनेपछि मानिसहरु जतिबेला पनि मोबाइलमै झुन्डिने गर्छन् ...
२ असोज, काठमाडौं । नजिकिँदै गरेको चाड पर्वलाई लक्षित गर्दै सुनधारास्थित सिटिसी मलमा मोबाइल मेला आयोजना हुने भएको छ । मलको भुई तल्लामा रहेको मोबाइलको नयाँ गन्तव्य सिटिसी मोबाइल हबमा चाडपर्व लक्षित अ...
ajakoartha.com . ८ महीना अघि
सदरमुकाम मुसिकोटमा रहेको करण मोबाइल पसलबाट रु तीन लाख बराबरको मोबाइलसहितका सामान चोरी गर्ने एक १६ वर्षीय युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । युवकले रातको समयमा मोबाइल पसलको ढोकामा लगाएको ताला तोडफोड...
सिटिसी मोबाइल मेलामा ७ सयदेखि २ लाखसम्मका मोबाइल, बाली ट्रिपदेखि स्कुटरसम्म उपहार
nepallive.com . ८ महीना अघि
बिजनेस लाइभ काठमाडौं– नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सुन्धारास्थित सिटिसी मलमा मोबाइल मेला आयोजना हुने भएको छ। मलको भुईंतल्लामा रहेको सिटिसी मोबाइल हबमा चाडपर्व लक्षित अफरसहित असोज ५ गतेदे...
karobardaily.com . ८ महीना अघि
नजिकिँदै गरेको चाड पर्वलाई लक्षित गर्दै सुनधारास्थित सिटिसी मलमा मोबाइल मेला आयोजना हुने भएको छ । मलको भुइँ तल्लामा रहेको मोबाइलको नयाँ गन्तव्य सिटिसी मोबाइल हबमा चाडपर्व लक्षित अफरहरूसहित आइतबारदे...
काठमाडौं– नजिकिँदै गरेको चाड पर्वलाई लक्षित गर्दै सुनधारास्थित सिटिसी मलमा मोबाइल मेला आयोजना हुने भएको छ । मलको भुई तल्लामा रहेको मोबाइलको नयाँ गन्तव्य सिटिसी मोबाइल हबमा चाडपर्व लक्षित अफरहरु स...